अध्याय ६५ | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मेरा वचनहरूले सधैँ तिमीहरूका कमजोरीहरूमा प्रहार गर्छन्, अर्थात् तिनले तिमीहरूका घातक कमजोरी औंल्याउँछन्; अन्यथा, तिमीहरू अझै पनि अल्याङटल्याङ गरिरहेका हुनेथ्यौ र तिमीहरूलाई अहिले समय कति भएको छ भन्‍नेसमेत थाहा हुँदैनथ्यो। यो कुरा जान! तिमीहरूलाई मुक्ति दिन म प्रेमको मार्ग प्रयोग गर्छु। तिमीहरूले जे-जसरी काम गरे पनि, मैले स्वीकृति गरेका कुराहरूलाई म पूरा गर्नेछु, र कुनै पनि गल्तीहरू गर्नेछैनँ। के म, धर्मी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरले गल्ती गर्न सक्छु? के त्यो मानवीय धारणा होइन र? मलाई भन: के मैले गर्ने र भन्‍ने सबै कुरा तिमीहरूकै खातिर होइनन् र? कतिपय मानिसहरूले नम्रताको साथ यसो भन्‍नेछन्, “हे परमेश्‍वर! तपाईंले गर्नुहुने हरेक कुरा हाम्रै लागि हुन्, तर तपाईंको अनुरूप कसरी काम गर्ने हामीलाई थाहा छैन।” कस्तो अज्ञानता! तिमीहरू यति हदसम्‍म जान्छौ कि मसँग सहकार्य कसरी गर्ने भन्‍नेसमेत आफूलाई थाहै छैन भनेर भन्छौ! यी सबै लाजमर्दो झूट हुन्! तिमीहरूले यस्ता कुराहरू व्यक्त गरेकाले, वास्तवमा किन तिमीहरूले देहलाई बारम्‍बार ध्यान दिन्छौ? तिमीहरूका वचनहरू असल सुनिन्छन्, तर तिमीहरू सहज र रोचक तरिकाले काम गर्दैनौ। तिमीहरूले यो कुरा बुझ्‍नैपर्छ: आज म तिमीहरूबाट त्यति धेरै माग्दिनँ, न त मेरा मापदण्डहरू तिमीहरूको पहुँचबाहिर नै छन्; ती मापदण्डहरू त मानवले हासिल गर्न सक्‍ने कुरा हुन्। म अलिकति पनि तिमीहरूको अधिमूल्यन गर्दिनँ। के मलाई मानिसका क्षमताहरूको हद थाहा छैन र? मलाई यसबारेमा स्पष्ट थाहा छ।
मेरा वचनहरूले तिमीहरूलाई निरन्तर अन्तर्दृष्टि दिन्छन्, तैपनि तिमीहरूको हृदय अत्यन्तै कठोर छ, र तिमीहरूले आफ्‍नो आत्माभित्र मेरो इच्‍छालाई बुझ्‍न सक्दैनौ! मलाई भन: मैले तिमीहरूलाई कतिपटक भोजन, वस्‍त्र वा तिमीहरूको बाहिरी स्वरूपमा होइन, तिमीहरूको भित्री जीवनमा ध्यान देओ भनेर याद गराएको छु? तिमीहरूले सुन्दै सुन्दैनौ। म बोल्दा-बोल्दा वाक्‍क भइसकेँ। के तिमीहरू यति अबुझ बनेका छौ? के तिमीहरू पूरै चेतनाशून्य बनेका छौ? के मेरा वचनहरू व्यर्थमा बोलिएका हुन् भन्‍ने लाग्छ? के मैले कुनै गल्ती बोलेँ? मेरा पुत्रहरू हो! मेरा इमानदार अभिप्रायहरूलाई बुझ! तिमीहरूको जीवन परिपक्‍व भएपछि, तिमीहरूले अब फेरि चिन्ता गर्नुपर्नेछैन र सबै कुराको बन्दोबस्त हुनेछ। अहिले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुको कुनै महत्त्व छैन। मेरो राज्य पूर्ण रूपमा वास्तविक भइसकेको छ, र यो सार्वजनिक रूपमै पृथ्वीमा ओर्लिसकेको छ; यसले मेरो न्याय पूर्ण रूपमा आइसकेको छ भन्‍ने कुरालाई अझै बढी इङ्गित गर्छ। के तिमीहरूले यसको अनुभव गरेका छौ? म तिमीहरूलाई न्याय गर्न मन पराउँदिनँ, तर तिमीहरूले मेरो हृदयको बारेमा अलिकति पनि विचार गर्दैनौ। तिमीहरूलाई निर्दयी न्यायको सट्टा निरन्तर मेरो प्रेमको वास्ता र सुरक्षा मिलोस् भन्‍ने मेरो इच्‍छा छ। के तिमीहरू न्यायमा पर्न इच्‍छुक छौ? होइन भने, किन तिमीहरू बारम्‍बार मेरो नजिक हुँदैनौ, किन मसँग सङ्गति गर्दैनौ, र किन मसँग संबद्ध हुँदैनौ? तैँले मसँग यति रूखो व्यवहार गर्छस्, तैपनि जब शैतानले तँलाई विचारहरू दिन्छ, ती तेरो आफ्‍नै इच्‍छाअनुसार छन् भनेर तँ उत्साहित हुन्छस्—तर मेरो खातिर भने तँ केही पनि गर्दैनस्। के तँ सधैँ मलाई यति निर्दयीसाथ व्यवहार गर्ने इच्‍छा गर्छस्?
मैले तँलाई दिन नचाहेको होइन, बरु तिमीहरू नै मूल्य चुकाउन तयार छैनौ। त्यसैले, तिमीहरूसँग केही पनि छैन, रित्तो हात छौ। के तिमीहरू पवित्र आत्‍माको कार्य कति छिटो अघि बढिरहेको छ भन्‍ने देख्दैनौ? के तिमीहरू मेरो हृदय चिन्ताले जल्छ भन्‍ने देख्दैनौ? म तिमीहरूलाई मसँग सहकार्य गर भनी भन्छु, तर तिमीहरू अनिच्‍छुक रहन्छौ। हरप्रकारका प्रकोपहरू एकपछि अर्को गरी आइपर्नेछन्; सबै राष्‍ट्र र ठाउँहरूले विपत् भोग्‍नेछन्: महामारी, अनिकाल, बाढी, खडेरी र भूकम्प सबैतिर आउनेछन्। यी प्रकोपहरू एक वा दुई ठाउँहरूमा मात्र घट्नेछैनन्, न त यी एक वा दुई दिनमा नै सकिनेछन्; यी प्रकोपहरू त अझ ठूला-ठूला क्षेत्रहरूमा फैलँदै र झन्झन् गम्भीर बन्दै जानेछन्। यस अवधिमा, हरकिसिमका कीटजन्य महामारीहरू एकपछि अर्को गरी उत्पन्‍न हुँदै जानेछन् र नरभक्षणका घटनाहरू जताततै देखा पर्नेछन्। सबै राष्‍ट्र र मानिसहरूमाथि यो मेरो न्याय हो। मेरा पुत्रहरू हो! तिमीहरूले विपत्तिहरूको पीडा वा कठिनाइ भोग्‍नुपर्दैन। मेरो यही चाहना छ कि तिमीहरू चाँडै वयस्क बन र सकेसम्म चाँडो मेरो काँधको बोझ उठाओ। तिमीहरू किन मेरो इच्छा बुझ्दैनौ? अब आउने कार्यहरू झन्-झन् कठिन हुँदै जानेछन्। के तिमीहरूको हृदय यति कठोर छ र तिमीहरू सबै काम मेरो हातमा राखेर ती सबै म आफैले कठिनाइसाथ गर्नुपर्ने गरी छोडिदिन्छौ? म यसलाई अझ स्पष्ट रूपमा भन्छु: जीवन परिपक्‍व हुनेहरू आश्रयस्थलमा प्रवेश गर्नेछन्, र तिनीहरूले कुनै पीडा वा कठिनाइ भोग्‍नेछैनन्। जीवन परिपक्‍व नहुनेहरूले पीडा र हानि भोग्‍नेछन्। मेरा वचनहरू स्पष्ट छन्, छैनन् र?
मेरो नाउँ सबै दिशा र सबै स्थानमा फैलिनुपर्छ, ताकि सबैले मेरो पवित्र नाउँ र मलाई चिन्‍न सकून्। अमेरिका, जापान, क्यानडा, सिंगापुर, सोभियत रसिया, मकाउ, हङकङ र अन्य देशहरूका हरपेशा अँगाल्ने मानिसहरू साँचो मार्गको खोजी गर्दै एकसाथ चीनमा भेला हुनेछन्। तिनीहरूलाई पहिले नै मेरो नाउँको साक्षी दिइएको छ; अब तिमीहरू हरसम्भव चाँडो परिपक्‍व हुन मात्र बाँकी छ, ताकि तिमीहरूले गोठालो बनेर उनीहरूलाई डोऱ्याउन सक। यसैले म त भन्छु, गर्नुपर्ने काम अझ धेरै छ। विपत्ति सुरु हुँदा मेरो नाउँ व्यापक रूपमा प्रसारित हुनेछ र यदि तिमीहरू होसियार भएनौ भने, तिमीहरूले आफ्नो आधिकारिक हिस्सा गुमाउनेछौ। के तिमीहरूलाई डर लाग्दैन? मेरो नाउँ सबै धर्म, सबै पेशा, सबै जाति र सबै सम्प्रदायमा फैलनेछ। यो व्यवस्थित तरिकामा भइरहेको र नजिकबाट जोडिएको काम हो; यो सबै मेरो बुद्धिमानी बन्दोबस्तद्वारा हुन्छ। म केवल यो इच्छा गर्छु कि तिमीहरू मेरा पाइलाहरू नजिकबाट पछ्याउँदै प्रत्येक चरणको साथमा अगाडि बढ्न सक।
अघिल्लो: अध्याय ६४
अर्को: अध्याय ६६